Somali – Page 2 – S63 Productions
Soomaaliya ayaa Axaddii ka heshay Shiinaha 200,000 qaadasho oo ah tallaalka Sinopharm Covid-19. Wasiirka Caafimaadka Fawziya Abiikar ayaa ka heshay dawadan dawada Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya Qin Jian. Soomaaliya ayaa bishii la soo dhaafey hesha ...
A new case of Ebola virus detected in DR Congo.
Kiis cusub oo cudurka virus-ka Ebola ah ayaa laga helay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Haweeney ka timid magaalada Biena oo u dhow magaalada Butembo ayaa u dhimatay cudurka. Masuuliyiintu waxay sheegeen inay koox jawaab celin ah u d ...
Man City thrash Liverpool to take a stronghold on the English Premier League.
Manchester City ayaa si adag go'aan uga qaadatay hanashada horyaalka Premier League madaama ay Liverpool ku xasuuqeen Anfield - waxaana caawiyay qaab ciyaareed wanaagsan oo uu sameeyay Phil Foden iyo qaab ciyaareed qarow ah oo ka yimid goolhayaha kooxda ...
Madaxweynaha Uganda ayaa amar ku bixiyay in la joojiyo sanduuq malaayiin doolar ah oo ay dhisteen wadamada deeqda bixiya, kadib markii uu ka cawday in ay wadaan ajaanib isla markaana wiiqayso madaxbanaanida Uganda. Warqad ayuu Mr Museveni ku amray boo ...